Nje mwekota PA-3000-Anyị Jera ulo oru a ọhụrụ ngwaahịa
Latest Ihe ngosi
Anyị Jera okokụre na ọhụrụ ngwaahịa na-eji maka erughị ala nke na-efefe n'elu eriri optic cable, aha ya bụ PA-3000.
Anchoring mwekota PA-3000 bụ onwe-Ịgbazi, iji erughị ala ADSS ngwa anya eriri USB na-efefe n'elu Telecommunication e.
The ADSS erughị ala mwekota mejupụtara onwe-ukpụhọde plastic wedges, nke mwekota ngwa anya cable enweghị emebiri. Dịgasị iche iche nke oké ọgba akọ archived site dị iche iche nke wedges ADSS arịlịka mwekota.
The igwe anaghị agba nchara ịgbapụta na-enye ohere nrụnye nke clamps na a osisi brackets ma ọ bụ nko na seaside ebe.
ADSS erughị ala mwekota PA-3000 dị ma iche iche ma ọ bụ ọnụ dị ka nzukọ na ADSS utari cable brackets na igwe anaghị agba nchara gbalaga.